Kwakutheni Ukuze UYesu Abhaptizwe? ▷ ➡️ Fumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Kwakutheni ukuze uYesu abhaptizwe? El Ubhaptizo sisenzo athi umntu ashiye ubomi bakhe behlabathi alandele uKristu. Ngokutsho kwezakwalizwi, amanzi ahlambulula umoya wethu wesono esivumela ukuba siqale "ubomi obutsha." Kuye nabani na ofuna ukulandela emanyathelweni kaYesu, esi sithethe sokomfuziselo sibalulekile. Nangona kunjalo,Kwakutheni ukuze uYesu abhaptizwe ukuba wayekhululekile esonweni?.
Ukusombulula lo mbuzo kuyimfuneko ukuba sihlalutye izicatshulwa zeBhayibhile ezithetha ngalo mbandela. Kuzo siya kufumana impendulo.
1 Kwakutheni Ukuze UYesu Abhaptizwe?: Zonke Izizathu
1.1 UYesu wabhaptizwa ukuze abonise ukuba ungubani na
1.2 UYesu wabhaptizwa ukuze aphawule ukuqalisa kobulungiseleli bakhe
1.3 UYesu wabhaptizwa njengomzekelo wethu sonke
Kwakutheni Ukuze UYesu Abhaptizwe?: Zonke Izizathu
Intsingiselo eyiyo yokuba kwakutheni ukuze uYesu abhaptizwe
UYesu wabhaptizwa nguYohane umbhaptizi ukuveza ubuni bakho, uphawule ukuqala kobulungiseleli bakho, kwaye ube ngumzekelo kuthi sonke. UYesu wayengenasono yaye kwakungeyomfuneko ukuba abhaptizwe ukuze aguquke.
UYohane umbhaptizi wayebhaptiza abantu ukuze baguquke ezonweni zabo. Wayelungisa iintliziyo zabantu ukuza kukaYesu. Xa uYesu weza kubhaptizwa, uYohane uMbhaptizi akazange afune. Wayesazi ukuba uYesu wayenguMesiya kwaye wayengenasono. Kodwa UYesu wamxelela ukuba kuyimfuneko, ukuzalisekisa konke okusesikweni. UYohane umBhaptizi wavuma waza wabhaptiza uYesu.
Njengoko kubhaliweyo ebaprofetini, kwathiwa,
Yabona, mna ndithuma umthunywa wam ngaphambi kobuso bakho,
Ngubani oya kulungisa indlela yakho phambi kwakho.
Ilizwi lalowo ukhwaza entlango:
Yilungiseleleni indlela iNkosi,
Wenze uthi tye umendo wabo.
UYohane, ebhaptiza entlango, evakalisa ubhaptizo lwenguquko, ukuze kuxolelwe izono.
UMarko 1: 2-4
Kuthi ngelo xa afike uYesu eYordan kuYohane, evela kwelaseGalili, ukuba abhaptizwe nguye.
Ke kaloku uYohane wamchasa, esithi, Mna kufuneka ndibhaptizwe nguwe nje, uza kum na wena?
Waphendula uYesu wathi kuye, Mka apha, ngenxa yokuba ubufanele ukuzalisekisa okusesikweni konke. Emva koko wamshiya.
UMateyu 3: 13-15
UYesu wabhaptizwa ukuze abonise ukuba ungubani na
Akuba uYesu ephumile emanzini, uMoya oyiNgcwele wehla phezu kwakhe enjengehobe, kwaza nelizwi eliphuma ezulwini lisithi: “UnguNyana wam oyintanda; Ndikholisiwe nguwe ”. UYesu waqondwa esidlangalaleni njengoNyana kaThixo.
Ke kaloku kwathi, bakuba bebhaptiziwe abantu bonke, wabhaptizwa noYesu; Kwathandaza, kwavuleka izulu, wehla phezu kwakhe uMoya oyiNgcwele, enembonakalo yomzimba enjengehobe; kwaphuma nezwi ezulwini, lisithi, Wena unguNyana wam oyintanda; Ndikholisiwe nguwe.
ULuka 3: 21-22
UYohane uMbhaptizi wawuqonda lo mqondiso. UThixo wayemlumkisile ukuba xa ebona uMoya oyiNgcwele esihla phezu komntu, loo mntu nguNyana kaThixo. Ukubhaptizwa kukaYesu, uThixo waqinisekisa ukuba unguMsindisi othenjisiweyo oza kususa isono sehlabathi.
NoYohane wangqina, esithi, Ndimbonile uMoya, esihla njengehobe, ephuma ezulwini, wahlala phezu kwakhe. Nam bendingamazi; Lowo wandithumayo ukubhaptiza ngamanzi, wathi kum, Othe wambona uMoya esihla ahlale phezu kwakhe, nguye lowo ubhaptiza ngoMoya oyiNgcwele. Nam ndimbonile, ndingqinile, ukuba lo nguye uNyana kaThixo.
UYohane 1: 32-34
UYesu wabhaptizwa ukuze aphawule ukuqalisa kobulungiseleli bakhe
Ngaphambi kokuba abhaptizwe, uYesu wayephila njengomntu oqhelekileyo, engafundisi abantu okanye enze imimangaliso. Wayengumchweli kwaye akazange atsalane. Ubhaptizo luphawule ukuphela kwexesha lokukhula kunye nokulungiselela kunye nokuqala kobulungiseleli bukaYesu esidlangalaleni.
Xa uYesu wayebhaptizwa, kwaqinisekiswa ukuba wayenamandla oMoya oyiNgcwele okuphumeza ukuthanda kukaThixo. Ubhaptizo lwakhe lwatyhila no injongo yolungiselelo lwakho: zichonge umoni oguqukayo kwaye uthwale izono zethu.
Anazi na ukuba thina sonke, sabhaptizelwayo kuKristu Yesu, sabhaptizelwa ekufeni kwakhe?
Kuba sangcwatywa kunye naye ekufeni ngokubhaptizwa, ukuze njengokuba uKristu wavuka kwabafileyo ngozuko lukaYise, nathi ngokunjalo sihambe kubomi obutsha.
KwabaseRoma 6: 3-4
UYesu wabhaptizwa njengomzekelo wethu sonke
UYesu ungumzekelo kuthi kuyo yonke into awayenzayo. Wabhaptizwa ukuze abonise ukubaluleka kwenguquko. Ukuguquka kubalulekile kusindiso. Xa umntu eguquka ezonweni zakhe aze amkele uYesu njengomsindisi wakhe, uba ngumntwana kaThixo.
Ubhaptizo lwamaKristu lukwabalulekile njengoko uphawu lwasesidlangalaleni lokuzibophelela kuThixo.
Ubhaptizo olufana nolo luyasisindisa ngoku (kungekhona ngokususa ubunyhukunyhuku benyama, kodwa ngokulangazelela kwesazela esilungileyo ngakuThixo) ngovuko lukaYesu Kristu, othe wenyuka waya ezulwini, esekunene kukaThixo. zithotyelwe phantsi kwakhe izithunywa zezulu, noomagunya, namandla.
Eyesi-1 kaPetros 3: 21-22
UYesu wabonisa ukuba wayezinikele ngokupheleleyo ekwenzeni ukuthanda kukaThixo. Kwakhona Wayalela ukuba wonke umntu othembisa ukuba ngumlandeli wakhe abhaptizwe.
Hambani ngoko niye kuzenza abafundi zonke iintlanga, nibabhaptizela egameni loYise, loNyana, loMoya oyiNgcwele; nibafundisa ukuba bazigcine zonke izinto endiniwisele umthetho ngazo; kwaye yabonani, ndinani yonke imihla, kude kube sesiphelweni sehlabathi. Amen.
UMateyu 28: 19-20
Kube njalo! Siyathemba ukuba eli nqaku liyakunceda uqonde kwakutheni ukuze uYesu abhaptizwe. Ukuba ngoku ufuna ukufunda ezinye Amacebiso eBhayibhile ngendlela yokuxolela umntu, qhubeka ukhangela Fumanisa kwi-intanethi.